Ukusheshisa Business and Business Network
Acelerar Negócios e Desenvolver Conhecimento com a Business Networking
I entrepreneur ezinamakhono kunazo kwenza izinqumo ngokuzethemba ngaphezulu, masinya futhi kunciphisa ubungozi. Kodwa futhi kudingeka abe Networking Business, oxhumana nendawo ukubonisa imikhiqizo kanye namasevisi.
ukuqeqeshwa kuphela, ngaphandle amathuba ukuthuthukisa ibhizinisi, akusho ukuhlangabezana nezidingo zosomabhizinisi.
Kepha usomabhizinisi udinga ukwazi Emasiko nezici zendawo imikhiqizo ukudayisa kwamanye amazwe izifunda kanye. It has imikhiqizo ezingaba ukuthengisa kahle enyakatho naseningizimu, nangasogwini lolwandle musa ukudayisa. Umkhiqizo angase abe barrier okufakiwe kwamanye amazwe. A wendawo cultura, kokubili esifundeni futhi kwelinye izwe, Usayizi izingqinamba can, bobunjwa nemibala. The usomabhizinisi udinga ukwazi amasiko isiko kanye, ngaphambi kokuqala supply imikhiqizo.
izinqubo ukuthekelisa futhi ukungenisa futhi ziyahlukahluka kuye ngamazwe. Amasu Izingxoxo futhi ziyahlukahluka, kanye nemigomo izikhathi izingxoxo futhi ziyahlukahluka.
I IEAGE Kutfutfukisa namandla osomabhizinisi futhi ihlinzeka isimo in kunethiwekhi global, ukuze osomabhizinisi ukusheshisa ibhizinisi, kodwa ngendlela bayazi futhi ngolwazi oludingekayo.
Inhloso Business Networking IEAGE Osomabhizinisi iwukuba omhlaba ukuxhuma osomabhizinisi abancane kanye medium, de forma segura, kuhlelwe, estruturada e de longa duração.
Yakha inethiwekhi nge ukuxhumeka eziqinile (nokwethembana) phakathi osomabhizinisi, ukwakha ibhoduluko kwezomnotho evumela ukuba wehlisa imiphumela esibucayi kwezomnotho global.
Okungukuthi, the IEAGE inikeza ulwazi on imikhuba umhlabeleli nesipiliyoni of ochwepheshe kanye amashumi eminyaka yomsebenzi kwenziwa, inikeza imvelo namathuluzi for kwebhizinisi, kukithi kube entrepreneur ukuthuthukisa bese uyawasebenzisa amathuba, turning wabayisa imiphumela ukhonkolo kanye eziphumelelayo.
Meet Academy IEAGE kanye nezifundo wanikela:
Xhumanisa Academy IEAGE
← Business Environment and Ulwazi
Emithonjeni yolwazi →